Iselfowuni yeLayini yeMixholo yeeNgcali eziBonisa | Martech Zone
kunye mobile ukugqitha idesktop nge-imeyile evulekileyo amaxabiso, bendisenza uphando ngale njikalanga kwi ubude obubonakalayo bemigca yesifundo kwisixhobo esiphathwayo. Imigca yezihloko ibaluleke ngaphezu komxholo we-imeyile ngokwawo xa kufikwa kwindlela yokuziphatha komfundi kwaye nokuba bazakuyivula i-imeyile.
Ngoku uninzi lwe-imeyile luvulekile kwifowuni, i inani labalinganiswa une-iPhone, i-Android, iWindows okanye isixhobo seBlackberry sifutshane ngendlela emfutshane… phakathi kwama-33 nama-44 abalinganiswa. Isifundo sethu apha… Ukuboniswa kwemigca yesihloko se-imeyile iza kuphela ngoonobumba abangama-34. Ayilo gumbi elininzi ukuphakamisa umdla wokufunda kunye nokwenza ukuba bavule- ngumceli mngeni kubathengisi be-imeyile.
Okunfographic evela kwiMass Transmit Iinkcukacha zophando kwimiboniso yesifundo se-imeyile kwizixhobo eziphathwayo.
tags: Android ubude bomgca wesifundoubude bomgca weblackberryubude bomgca we-droidUmxholo wesifundo se-iphone 4I-4 ubude bomgca wesifundoUmxholo wesifundo se-iphone 5I-5 ubude bomgca wesifundoUmxholo wephoneubude bomgca wephoneimeyile ephathekayoubude bomgca wesihlokoUmgca wesifundo seewindowswindows ubude bomgca wesifundo
Ukufumana impendulo: Uphando olwenziwe kwi-Intanethi njengangaphambili